को हुन् भाइरल अघोर बाबाकी जिबनसाथी ? – ताजा समाचार
को हुन् भाइरल अघोर बाबाकी जिबनसाथी ?
पछिल्लो समय युट्युब लगायत वि’भिन्न समाजिक सं’जालहरुमा भाइरल बन्दै आएका अ’घोर बाबाले अ’न्ततः बि’वाह गरेका छन् ।
का’र्यक्रमका लागि चितवन जाँदा नजिकैको दे’वघाट मन्दिर पुगेर नदी किनारबाट आफूले यस अघि नै विबाह गरिसकेको कुरा भिडियो मार्फत् सार्वजानिक गरेका हुन् । आफ्नो मन मिल्ने जी’वनसाथी पाएको भन्दै दुवै जनाले ए’कसाथ खु’सी समेत व्य’क्त गरेका छन् । साथै यसरी नै आ’उने दिनहरुमा ए’कअर्काले साथ दिने प्र’तिवद्धता व्य’क्त गरेका छन् ।
बाबाले बिहे ग’रेको ३ महिना भैसकेको बताएका छन् । बाबा सँग बिवाह गर्ने महिलाको प’रिचय भने गो’प्य रा’खिएको छ। काठमाडौँमा जन्मिए पनि उनि ५ वर्ष देखि अ’नाथ भएका थिए । त्यसपछि उनि आ’श्रमको सा’हारामा पुगेका थिए । त्यसपछि उनि बाजेको सा’हारामा भारत पुगेका थिए ।उनि भारत गएर अ’घोरीबाबाको श’रणमा पुगे । त्यसपछि सुरु भयो उनको अ’र्को जी’वन । आज उनि ६१ वर्ष पुगी सके तर २० वर्षको हुदा देखि सि’केको अ’घोरबाबाको ध्या’न अझै दिन रात ज’ब्छन ।उनले विज्ञापन देखी म्युजिक भिडियोपनि खेलिसकेका छन् ।